Duulimaadka Garoonka Muqdisho oo la hakiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Diyaaradda soo dhacday ayaa waxay gargaar bini'aadnimo u wadey magaaladda Beledweyne, waxayna soo dhacday waxyar kadib markii ay ka duushay saakay Garoonka Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa hakad ku jiray duulimaadkii diyaaradaha Garoonka Muqdisho kadib markii saakay ay diyaayad wayn oo kuwa xumuulka qaada ay ku burburtay.
Diyaaradda oo ay leedahay Shirkadda Silverstone, oo fadhigeedu yahay Kenya ayaa wajiga hore ku dhufatay dermiga Garoonka ee dhinaca badda xiga, oo ku dhaw xarunta Xalane, waxaana dab uu ka kacay qeybta duuliyaha, inkastoo markii dambe la demiyay.
Diyaaradda ayaa waxay soo dhacday waxyar kadib markii ay u duushay dhinaca Beledweyne, oo gargaar bini'aadanimo u wadey, iyadoo u kireysanayd UN-ka.
Waaxda duulista Garoonka ayaa xaqiijiysay in labo qof ay ku dhaawacmeen shilka, waxayna ahaayeen dadka la socday diyaaradda 4 qof oo shaqaale ahaa dhamaantooda. Waxaa socda howlo diyaarada burbursan goobta looga qaadayo.
Waa shilkii 4aad oo sanadkan ka dhaca Soomaaliya, iyadoo labo kamid ah shilalkaas ay galeen diyaarado ay leedahay Shirkadda Silverstone, oo la sheegay in diyaaradeeda laga mamnuucay garoomada adduunka. [Halkan ka akhri Warbixin]
0 Comments Topics: garoonka diyaaradaha shil diyaaradeed
War laga soo saaray hubka lala galo Garoonka Aadan Cadde
Warar 3 January 2021 12:31
Wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war kasoo saartay hubka lala galo gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde
Shil diyaaradeed oo ka dhacay Garoonka Garoowe
Warar 2 December 2020 11:05
Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Garoonka Muqdisho
Warar 29 September 2020 14:27